Maamulka Puntland oo digniin culus kasoo saaray urur diimeed cusub kusoo kordhay Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka Puntland oo digniin culus kasoo saaray urur diimeed cusub kusoo kordhay Soomaaliya
Kulan ay maalintii shalay isugu yimaadeen golaha wasiiradda maamulka Puntland islamarkaana uu shir guddoominaayay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi C/xakiim Xaaji Cumar Cameey ayaa loogaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin khatarta ka imaan karta urur diimeed cusub oo dhawaan kusoo korortay Soomaaliya, arrimaha amniga, abaaraha iyo xeerar la ansixiyay.
War-murtiyeed kulankaasi kadib lasoo saaray ayaa loogaga digay khatar la sheegay inay kusoo korortay dalka Soomaaliya, waxaana loogu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyadda kale ee dalka iyo culuma’udiinka Soomaaliya in si wadajir ah loo wajaho khatarta amniga iyo caqiido ahaaneed.
“Ururka takfiiriga ah ayaa maalmahaan ummadda Soomaaliyeed kala hadlayay warbaahinta, iyagoo sheegay baaqyo kala dambeeyay oo ku saabsan caqiidada islaamka, sidaas darteed dowladda Puntland waxay ugu baaqeysaa dowladda federaalka Soomaaliya, maamulada xubinta ka ah dowladda federaalka iyo culumada Soomaaliyeed in si deg deg ah la iskaga kaashado, si loo yeesho siyaasad mideynsan oo ku wajahan khatarta amni iyo caqiiqdo ee kusoo korortay gayiga Soomaaliya” Ayaa lagu yiri war-murtiyeedka.
Maalmihii u dambeeysay waxaa magaalada Muqdisho kulamo ku yeeshay, islamarkaana warbaahinta bulshada muuqaalo ay soo duubeen ku faafiyay koox diimeed la magac baxday jamaacadda Al-saadiciin Bil-xaq (Kooxda Aan Xaqa La Gamban), waxaana muuqaalada ka dhex muuqday shaqsiyaad si weyn looga yaqaano Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland.
Koox diimeedkaan cusub ayaa la sheegayaa inay aad ugu duwan yihiin jamaacooyinkii hore uga jiray dalka Soomaaliya, waxayna isugu jiraan shaqsiyaad diinta islaamka bartay, ganacsato, dhakhaatiir, injineero iyo xirfadlayaal kale.